Shiinaha qol yar oo la qaadan karo oo qaboojiye hawo leh oo leh baraf baako XK-05SY warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. XIKOO
XIKOO XK-05SY qol yar oo la qaadan karo oo qaboojiye hawo leh ayaa aad caan u ah, hoos u dhig heerkulka iyada oo loo marayo uumi baxa biyaha. waana wax yar oo qurux badan, waxaa jira astaamo sida hoos ku xusan:
Isticmaal awood yar oo aad u hooseeya 0.15kW / h & awood badan 5000m3 / h hawo, dabool 20-30m2.
Codsiga : XK-05SY qaboojiyaha hawadu wuxuu leeyahay qaboojinta, qoyaanka, nadiifinta, tamarta keydinta shaqooyinka kale, iyo sidoo kale saameyn carrab la '. Waxaa si aad ah loogu isticmaalaa guriga, dukaan xafiis iyo meelo kale.
Hore: ahama warshad weyn oo warshad weynta ooler XK-30 / 35/45 / 50S
Xiga: uumi-baxa guriga la qaadan karo oo qaboojiyaha hawada Shiinaha soosaara XK-06SY
Hawada Qaboojiyaha Hawada
Qaboojiyaha Hawada Guriga
baraf qaboojiyaha hawada
Qaboojiyaha Hawada Gudaha
Qaboojiyaha Hawada ee ugu dambeeya
Xafiiska Hawo Qaboojiyaha
Meeldhexaadka ah hawada uumi warshad qaboojiyaha for ...